Page-4 All Products - Hobby Carbon CNC Technology(Shenzhen) Limited
I-standoff ekhethekileyo yokuxuba umbala we-hex aluminium standoff
Ubunzima obuqinileyo bokukhanya kwe-carbon fiber macala onke
Ukuchaneka okuphezulu kwe-CNC ye-carbon fiber ukusika
Kutheni le nto i-carbon fiber ilula kangaka
Amandla ama-3k ikhabhathi yeflatisi yeflashini yamayeza-ukuthamba kukhetha
ikharbhon fiber enomzobo wokukrola
Iphepha lekhabhoni lebhabheli kwiipaneli zesixhobo sikhephe
Iphepha lekhabhoni lebhabhile kwintengiso kufutshane nam
Ungayithenga phi i-carbon fiber sheet
I-3K Twill Matte Cnc yokusika iiphaneli zeCarbon Fibre
Min. Myalelo: 10 Pair
Ikharbhon ye-fiber isikwere i-20mm Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeCarbon fiber inokukhanya, amandla aphezulu, ayinakudingeka, kunye neCTE ephantsi kakhulu (ukuqiniswa kwesandiso eshushu), ngaphezulu koko, i-carbon fiber ayidluliseli ubushushu njengoko kufanelekile kwizinyithi ezininzi. Izibonelelo zethu ezikhulu...
Icarbon fiber isikwere esiyi-10mm Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeCarbon fiber inokukhanya, amandla aphezulu, ayinakudingeka, kunye neCTE ephantsi kakhulu (ukuqiniswa kwesandiso eshushu), ngaphezulu koko, i-carbon fiber ayidluliseli ubushushu njengoko kufanelekile kwizinyithi ezininzi. Izibonelelo zethu ezikhulu...
Ixabiso lento: USD 0.19 / Piece/Pieces
Min. Myalelo: 10 Piece/Pieces
Iibhodi ze-aluminium ze-aluminium ezimile ze-M6 Abanye abathengi banokundibuza ukuba kutheni ndingakhethi i-aluminium engama-7075 ukwenza i-aluminium standoff. Kungenxa yokuba ubunzima be aluminium ezingama-6061 banele. Ngaphezu kwe-7075 kunzima ukuyenza, umbala wayo awukhanyi njenge-6061. Ukuba awuna mfuneko iphezulu...
Ubudoda obudoda obuxutywe kwi-hex ukuma kwe-aluminium okanye i-nylon I-Anodised Aluminium Hex Standoff inobuso obuhle kunye nentambo yomfazi kwiziphelo zombini. I-Aluminium isisindo esilula kunye nokuchasana nokulungiswa, ngoko ke isetyenziswa ngokubanzi kwintsimi ye-drone. I-Hex Aluminium Standoffs sisantya esine-6...
Umbala okhethekileyo wesilisa i-aluminium kwibhinqileyo yabasetyhini Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza ngokwezifiso. Iyamelana ne-corrosion kwaye ayisiyiyo ine -agnetic enesidima esihle sokugqibela....
Umxube we-aluminium ejikeleze i-spacer standoff Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza ngokwezifiso. Iyamelana ne-corrosion kwaye ayisiyiyo ine -agnetic enesidima esihle sokugqibela. Izinto zeAluminiyam...
Ixabiso lento: USD 0.19 / Bag/Bags
Min. Myalelo: 200 Bag/Bags
Umbala we-aluminium entle yombala ojikeleze ispacer Inkcazo yeMveliso : Isitayile sethu se-aluminium ukuma kwesitayile sobabini siphela ngentambo. Ukuba umthengi akafuneki eme ngentambo, sinakho ukwenza oko. Iyamelana ne-corrosion kwaye ayisiyiyo ine -agnetic enesidima esihle sokugqibela. Izinto zeAluminiyam...
Indoda kwibhinqa hex iskreyi standoff m3 nylon Intshayelelo ka-Standoff : Sobabini ukuma okumile -i-hex okanye imilo ejikelezileyo. Ingenziwa nge- aluminium , intsimbi engagqwanga, okanye i-nylon, kwaye inokuba nesitayela somzimba wesilisa okanye sowasetyhini. Ukuba ufuna umhlaba umhle ngakumbi, unokukhetha i-...
Indoda kwibhinqa hex iskreyi standoff m3 nylon Intshayelelo ka-Standoff : Ngokwesiqhelo, ii-aluminium standoffs zidlala indima yokuxhasa. i t kungenziwa edibene 2 iipleyiti carbon, ne ngezikhonkwane macala omabini, ukuba ibe yonke. Ngenxa ye-aluminium inokufakelwa umbala oqaqambileyo, ii-aluminium zethu ezimileyo...
Ingcaciso yeMveliso: I-standoff ekhethekileyo yokuxuba umbala we-hex aluminium standoff IHobbycarbon ngumenzi oqeqeshiweyo obalasele kwi-Carbon fiber kunye nezixhobo ezimalunga neshumi leminyaka yamava. Ukuze uhlangabezane nemfuno yabathengi abaninzi, senza iindidi ezininzi zokuma okufana neAluminium Hex Standoff ,...
Ingcaciso yeMveliso Ubunzima obuqinileyo bokukhanya kwe-carbon fiber macala onke I-Tube yeCarbon Fibre inezibonelelo zamandla aphezulu, ubomi obude, ukumelana ne-corrosion, ubunzima bokukhanya kunye nobunzima obuphantsi. Isetyenziswe ngokubanzi kwii-kites, imodeli yomoya ohamba ngeenqwelomoya, iibhloksi zesibane,...
Ingcaciso yeMveliso Ukuchaneka okuphezulu kwe-CNC ye-carbon fiber ukusika Ukusika i-Carbon Fibre yeCarbon yindlela ekhethekileyo yokunceda abathengi bafumane isakhelo esikhethekileyo ukuvelisa i-drones yabo kwimarike. Senze intsebenziswano ezininzi kunye ne-brand eyaziwayo kwaye sifumana ngakumbi kunye nengxelo...
indawo yokuthenga ibhodi yecarbon fiber Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko ukuguqula...
Ingcaciso yeMveliso Amandla ama-3k ikhabhathi yeflatisi yeflashini yamayeza-ukuthamba kukhetha Isici : I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye nemathiriyeli ephezulu yefomulus enomxholo ongaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo...
Igama lemveliso : Ukuhanjiswa kweefandesi zokutshixa kweefandesi zerhasi jam nati Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I-Hexagonal Nylon Nut, i-Aluminium Barrel Nut, i-Aluminium Blind Rivet Nut, Amantloko e-Hexagonal, Amanqindi Inzuzo: umphezulu omuhle, ubunzima obukhanyayo, izixhobo...
Igama lemveliso: i- aluminium alloy nylon self-locking nut Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I-Hexagonal Nylon Nut, i-Aluminium Barrel Nut, i-Aluminium Blind Rivet Nut, Amantloko e-Hexagonal, Amanqindi Inzuzo: umphezulu omuhle, ubunzima obukhanyayo, izixhobo zekhompyutha ezaneleyo...
ikharbhon fiber enomzobo wokukrola Iphepha leCarbon fiber linamandla aphakamileyo, ubunzima obukhanyayo, kunye nokubengezela kweMatte okugqityiweyo, la makhishithi anokusetyenziselwa ukwakha izakhiwo ezomeleleyo, ukwenza izixhaso, okanye ukwakha amalungu akho. Isetyenziswe ngokubanzi iAerospace, imodeli ye-RC, imoto...
Iphepha lekhabhoni lebhabheli kwiipaneli zesixhobo sikhephe Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo,...
Iphepha lekhabhoni lebhabhile kwintengiso kufutshane nam Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko...
Ungayithenga phi i-carbon fiber sheet Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko ukuguqula inkqubo...
I-3K Twill Matte Cnc yokusika iiphaneli zeCarbon Fibre Apha ngezantsi kukho izibonelelo zematshini ye- CNC: (1) Isixa esikhulu sokwehliswa kwenombolo yokusetyenziswa kwesixhobo, kwaye iinxalenye ezinobunzima zamacandelo azifuni isixhobo esinzima. Ukuba sifuna ukutshintsha imilo nobungakanani bamacandelo, kuyimfuneko...